Esri dia namoaka ny Smarter Government Workbook nataon'i Martin O'Malley - Geofumadas
Jolay, 2020 ArcGIS-ESRI, Blog, Cartografia, Fialam-boly / fitaomam-panahy
Esri dia nanambara ny famoahana an'i Boky tsotran'ny governemanta ho an'ny saina: Boky fampidirana 14 herinandro amin'ny fitantanana ny valiny Nataon'i Governora Maryland teo aloha Martin O'Malley. Manala ny lesona amin'ny boky teo aloha ilay boky, Governemanta hendry: Ahoana ny fitantanana ny valiny amin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalanaIzy io dia manolotra drafitra fohy, azo atao, mora arahana, drafitra 14 herinandro izay ahafahan'ny governemanta manaraka izany hahatrarana fitantanana stratejika. Ny atrikasa dia ahafahan'ny mpamaky mamorona rafitra iray:
Angony ary zarao ny fampahalalana marina sy ara-potoana
Atsipazo haingana ny loharanon-karena.
Manorena mpitarika sy fiaraha-miasa.
Mamolavola sy manadio ireo tanjona stratejika ary ireo tondro mahomby.
Tombantombana ny valiny.
En Governemanta matanjaka kokoaO'Malley dia naka ny traikefany lalina tamin'ny fampiharana ny rafitra fitantanana sy fandrefesana ny fahombiazana ("Stat") eo amin'ny tanàna sy ny fari-piadidiam-panjakana ao Baltimore sy Maryland. Vokatr'ireny politika ireny dia niaina ny fihenan'ny asan-dahalo lehibe indrindra amin'ny tanàna lehibe rehetra amin'ny tantaran'i Etazonia; ny famerenana ny fihenan'ny 300 taona ny fahasalaman'ny Chesapeake Bay sy ny sekoly laharana voalohany tany Etazonia nandritra ny dimy taona nisesy.
"Vao tsy ela akory izahay dia tsy nahita ny anjara asa lehibe raisin'ny governora," hoy i O'Malley. “Manana baiko mitambatra izy ireo ary miandrandra krizy mandroso haingana izy ireo. Ireo no fahaiza-mitarika izay mamonjy aina rehefa sendra krizy. "
Izao dia afaka mandray ireo vahaolana voaporofo ireo mpitarika ary mampihatra azy ireo amin'ireo fikambanan'ny governemanta ao anatin'ny efa-bolana latsaka. Boky tsotran'ny governemanta Tena mpiara-miasa ho an'ny Governemanta matanjaka kokoa ary manatanteraka ny fampanantenan'i Stat.
Boky tsotran'ny governemanta ho an'ny hendry: Boky fanatanterahana 14 herinandro amin'ny fanomezana valiny Hita amin'ny fanaovana pirinty (ISBN: 9781589486027, pejy 80, $ 19.99) ary azo alaina amin'ireo ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera manerantany. Azo alaina ao amin'ny fividianana amin'ny esri.com na amin'ny fiantsoana 1-800-447-9778.
Raha ivelan'i Etazonia ianao dia mitsidika esripressorder raha te hahita ny safidy feno, na ao amin'ny tranokalan'ny Esri hifandraisanao amin'ny mpivarotra eo an-toerana. Ireo mpivarotra liana dia afaka mifandray amin'ny mpivarotra boky Esri Press, Services Publisher Ingram.
Previous Post«Previous ETO ary Loqate Expand Partnership mba hanampiana ireo orinasan-tserasera manatsara ny fandefasana
Next Post Vaovao vaovao ho an'ny andian-dahatsoratra Bentley Institute: Inside MicroStation CONNECT Editionmanaraka »